★Isitudiyo seRustic & Modern eLekki e-1★ - I-Airbnb
★Isitudiyo seRustic & Modern eLekki e-1★
ISAZISO ESIBALULEKILEYO: Ngenxa ye-coronavirus, senza unakonako ukuze sibulale iintsholongwane kule flethi okanye kwindlu ekwicomplex. Unikwa ingqalelo engakumbi kwiindawo ezibanjwa qho njengeendawo zokuvula ucango, iirimowuthi, iindawo zokulayita izibane, izitshixo, izixhobo zasekhitshini kunye nezinto zasekhitshini njl. Izinto zethu zebhedi zihlanjiwe ngeblitshi enamaqondo obushushu aphezulu ukuya kutsho kwi-95C.
Ngenxa yokuba siqonda ukubaluleka kokuqinisekisa ukuba uthatha amanyathelo afanelekileyo okuzikhusela, siza kukunika izinto zokunciphisa iintsholongwane zezandla xa ubhalisa xa ufika.
Le studiyo intle kakhulu yenzelwe ukukunika yonke intuthuzelo oyidingayo nokunye! Inazo zonke izinto onokuzisebenzisa ozidingayo ukuze uhlale kamnandi! Ime kwindawo ekhuselekileyo eLekki e-1. Indawo esembindini yenza kube lula kakhulu ukuhamba-hamba. Ngemoto yimizuzu eyi-4 kuphela ukuya kwindlela ye-Admiralty apho unokuzonwabisa khona ngeevenkile zokutyela, iindawo zokuhlala kunye neebhari ezahlukeneyo.
Ibhedi elala abantu ababini etofotofo, isofa ekwikona enee-smart tv eziyi-55-inch, ikhitshi elincinci elinetafile yeebhari, zonke zidityaniswe ngokulula kwindawo emalunga ne-20sqm.
Ikhitshi elincinci linazo zonke izinto zokulungiselela isidlo esikhawulezileyo:
✓ Ifriji enefriji (ngaphantsi kohlobo lwekhabhathi)
✓ Isitovu (iipleyiti eziyi-2)
Izinto✓ zasekhitshini, iimbiza, izixhobo zetafile nezinye izinto.
Indawo isembindini, kwaye ikufutshane ne-lekki-epe expressway. Ngaphandle nje komhlaba kukho iivenkile ezimbalwa (ivenkile enkulu, amayeza njl) kunye nekliniki yezempilo.
Kukho umntu ohoyayo osoloko ekhona. Uya kwamkela kwaye akunike izitshixo. Uhlala 'kwindlu yasekuhlaleni' kwaye nguye olawula ukuqinisekisa ukuba uhlala unamanzi/umbane kwaye uvula isango.
Ukuba unemibuzo okanye ukuba ufuna uncedo ngento ethile ungandithumelela umyalezo apha kwiwebhusayithi. Xa kuvela imeko yongxamiseko unokuqhakamshelana nenye yeenombolo zefowuni ezifakwe emva kokuba ukubhukisha kwakho kugqityiwe.
Kukho umntu ohoyayo osoloko ekhona. Uya kwamkela kwaye akunike izitshixo. Uhlala 'kwindlu yasekuhlaleni' kwaye nguye olawula ukuqinisekisa ukuba uhlala unamanzi/umbane kwaye uvula…